Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Badbaadada Hawsha Duulimaadyada Itoobiya ee Cidhifka ah?
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Itoobiya • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka
Xaalada dagaalada sokeeye ee Itoobiya ayaa maalinba maalinta ka danbaysa sii xumaanaysa. Ethiopian Airlines waa astaan ​​sharaf u ah Afrikaanka. Hanjabaadaha ka dhanka ah heerka badbaadada ee ET ayaa argagax ku ah qaar badan oo ka mid ah qaaradda iyo adduunka duulista. Waxay kaloo khatar ku tahay dhaqaala badan oo Afrikaan ah.
Afrikaanku weligood ma ilaawi doonaan burburkii diyaaradda Boeing 737 Max Itoobiya iyo sida ay warbaahinta reer galbeedku ugu yaaceen inay eedaan duuliyayaasha Itoobiya! Maanta Boeing ayaa la xaqiijiyay in ay tahay dambiilaha, waxaana is bedelay codka warbaahinta.
Maanta Maraykanku waxa uu uga digayaa duuliyayaasha garoonka caalamiga ah ee Addis Ababa in ay nabad-gelyo la’aan noqdaan, sababtoo ah kooxda argagixisada ah ee TPLF. Ma jirto koox hubaysan oo soo gali karta Addis Ababa! Ma jirto koox hubaysan oo taas samayn karta.
Fariimahan iyo kuwo kale oo badan ayaa soo buux dhaafiyay baraha bulshada. Xaqiiqdu waxay ahaanaysaa Maraykanka iDuuliyayaasha digniinta u ah in diyaaradaha ka hawlgala mid ka mid ah garoommada ugu mashquulka badan Afrika ay “si toos ah ama si dadbanba u soo bandhigi karaan hubka dhulka iyo/ama gantaalada hawada ka koraya” Dagaalka Ethiopia oo u dhow caasimadda Addis Ababa.
Xabashida ayaa qarka u saaran digniinta Mareykanka iyo digniinta Mareykanka ee ah in dadka Mareykanka ah ay dalka isaga baxaan.
Fariintu waa: Ha isticmaalin Ethiopian Airlines. Tweets ayaa sheegaya in ujeedadu tahay in Maraykanku uu curyaamiyo dhaqaalaha Itoobiya. Kani waa dagaal aan la shaacin oo uu Maraykanku ku dhawaaqay!!!
La-talinta Maamulka Duulimaadyada Federaalka ee la soo saaray Arbacadii ayaa soo xiganeysa "isku-dhacyada socda" ee u dhexeeya ciidammada Itoobiya iyo dagaalyahannada ka soo jeeda waqooyiga gobolka Tigray, kuwaas oo ay ku dhinteen kumannaan qof sannad dagaal ah. Mareykanka ayaa todobaadkan ku booriyay muwaadiniintiisa ku sugan Itoobiya inay "hadda ka baxaan," isagoo sheegay inaan la fileynin daadgureyn la mid ah Afgaanistaan.
Dadaalka diblumaasiyadeed ee lagu joojinayo dagaalka ayaa la kulmay iska caabin, balse Madaxweynaha Kenya ayaa Arbacadii u sheegay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku jooga dalka Itoobiya in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo kulan yeeshay Axaddii uu muujiyay inuu diyaar u yahay inuu tixgeliyo dhowr hindise si xiisadda loo qaboojiyo, loona yareeyo rabshadaha. ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda.
Dhanka kale qoraalo ka soo baxay Itoobiya ayaa lagu dalbanayay in Mareykanka uu joojiyo cabsi gelinta dadka, iyadoo lagu andacoonayo in Addis Ababa ay nabad tahay.
Qoraallada kale ee twitter-ka la soo dhigay ayaa soo jeedinaya in ururka Midowga Afrika ee fadhigiisu yahay Addis Ababa uu u guuro waddan kale oo Afrikaan ah.
Gudoomiyaha Gudiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube "Waxaan dhowr jeer u duulay Itoobiya oo aan soo maray Addis Ababa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, waxaana la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda." Ma jirto wax khatar ah oo soo fool leh, waana in hoggaanka Ethiopian Airlines lagu aamino go’aankooda ah inay si nabad ah ugu shaqeeyaan shirkadda.”
"Waxaan rajeynayaa in laga baaqsan karo sii hurinta colaadda sokeeye"
Freddy L kober wuxuu leeyahay,
Nofeembar 21, 2021 at 13: 34
Kumanaan qof ayaa horay loo dilay. Tplf waxay ku dhowdahay Addis Ababa waxay u jirtaa ilaa 100 kiiloomitir. Ciidanka Xoraynta Oromada ayaa fadhiya bannaanka madaxtooyada iyagoo sugaya Tplf si ay u soo galaan caasimadda iyagoo dhinacyo kala duwan leh. Sidoo kale waxay qabqabanayaan dadka Tigrayga ah ee ku sugan caasimadda laakiin waxay sheegeen inay nabad qabaan.
PM wuxuu ku nool yahay lala land markabkiisi ayaa quusaya oo wuxuu doonayaa inuu soo dejiyo dadka quruxda badan ee la socda.
Jenny Brown wuxuu leeyahay,
Nofeembar 21, 2021 at 05: 16
Haddaba maxay tahay sababta dhulka qof u malaynayo in u duulista aagga dagaalku ay ammaan tahay? Waan arki karnaa.
Nofeembar 21, 2021 at 05: 15
Haddaba maxay tahay sababta dhulka qof u malaynayo in u duulista aagga dagaalku ay ammaan tahay? Ma doqon baanu nahay shacabka duulaya?